Ao India, arovan’ny polisy ny omby, ahilika miandry fotoana ny olona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2018 6:32 GMT
Vakio amin'ny teny русский, ਪੰਜਾਬੀ, Ελληνικά, Español, English
Haindò an-tapitrisany no manaja sy mivavaka amin'ny omby. Sary nandalo Pixabay avy amin'i Ahill88. CC0
Ao India izay misy Haindò an-tapitrisany mivavaka amin'ny ombivavy ary mametraka lalàna ny fanjakana sasany mandràra ny famonoana sy ny fihinanana azy ireny, nisy famonoana andianà Miozolomana voampanga ho nanao fanondranana omby an-tsokosoko hohanina nandritra ny taona maromaro lasa izay.
Nampijalian‘ny andiam-bahoaka Haindò ilay Miozolomana tompon'ny fanodinana ronono Pehlu Khan tamin'ny taona 2017. Nampijaliana sy novonoina i Rakbar Khan lehilahy miozolomana iray rehefa tratra nitondra omby tany amin'ny distrikan'ny Alwar ao Rajasthan tamin'ny Asabotsy ofaha 21 Jolay 2018.
Ao anatin'izany no iheveran'ny maro fa misy tsy firaharahiana sy tsy fihetsehana ataon'ny fanjakana. Nitatitra ireo omby tamina toerana natao hiarovana ny omby ireo polisy talohan'ny nampidirana hopitaly an'i Khan efa ho adiny efatra taty aoriana, ka voatsikeran'ny mpiserasera, ny mpikatroka ary ny olom-pirenena izany.
Lasibatry ny andian'olona mitam-piadiana avy any Haryana fanjakana mifanolo-bodirindrina i Khan 28 taona sy i Aslam namany rehefa nitatitra omby ho any amin'ny distrikan'i Alwar. Maty noho ny ratra mafy nahazo azy sy voatazona tany amin'ny polisy i Khan rehefa voahitsakitsak'ireo mpanafika raha afa-nitsoaka tamin'ireo milaza ho Gau Rakshaks (mpiaro ny omby) kosa i Aslam.
Nahazo tsikera avy amin'ireo vondrona mpikatroka, ahitana ilay mpikatroka Tehseen Poonawala ho nanetsi-po ny Fitsarana Tampony handray fepetra hanoherana ireo fiadidiana any ifotony noho ny tsy fahafahany manakana ny fiverimberenan'ny famonoana olona mifandraika amin'ny raharahan'ombivavy, ny Bharatiya Janata Party avy amin'ny elatra havanana izay ny Praiminisitra Narendra Modi no filohany.
Niteny tao amin'ny twitter sy nanameloka ny zava-nitranga ary nanangam-panontaniana tamin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny polisy i Rahul Gandhi filohan'ny mpanohitra avy amin'ny Antoko Kongresy Indiana tamin'ny tsy firaharahian-dry zareo ilay niharam-boina na dia eo aza ny toe-javatra tena ratsy niainany.
Araka ny vaovao navoakan'ny haino aman-jery ao an-toerana dia nandany adiny telo sy dimy amby efapolo minitra ireo polisy nitondrana an'i Rakbar tany amin'ny hopitaly, ary mbola afaka niala sasatra nisotro dite nandritra ny fotoana farany niainan'i Khan.
Amin'ny fisandratan'ny andrimaso fiarovan'omby sy ny fiorenam-paka India ny nasionalisma Haindoa hiringiriny, nangataka tamin'ny parlemanta hiroso amin'ny fanaovana lalàna manokana iadiana amin'ny famonoan'olona ataon'andian'olona ny Fitsarana Tampony Indiana. Nilaza ireo trangam-pamonoan'olona ivelan'ny fitsarana ho “asa mahatsiravina ataon'ny fanjakan'andian'olona” i Dipak Misra, Lehiben'ny Fitsarana ao India.
Mirongatra ny Fanjakan'andian'olona ao India
Mpiserasera marobe no mampitaha ny trangan'i Khan sy Omar Mohammad, lehilahy Miozolomana novonoina tao amin'ny distrikan'i Alwar tamin'ny hetsika feno fankahalana sy hatezerana nataon'ny andrimaso haindoa izay nanomana ny famonoana azy noho ny antony ara-pivavahana:
Mampitaha hevitra ilay mpisera Twiter Irony Of India:
“Novonoina izy satria Miozolomana, lasa mpamono Miozolomana i Modi… Afaka mandefa azy any am-ponja izy ireo, midaroka azy, farafaharatsiny tokony narovan'izy ireo ny ainy”, hoy i Asmeena, mananontena an'i #Rakbarkhan izay novonoin'andian'olona vokatry ny tsaho ho manondrana omby antsokosoko tany amin'ny faritr'i #Awa #Rajasthan
Nanao fanamarihana goavana ny IndiaSpend, tranokalam-baovaon'ny asa fanaovan-gazety an-dahatahiry, amin'ny heloka bevava vokatry ny fankahalana sy ny fanenjehana ireo Miozolomana ao Rajasthan; izay mandràra ny fihinanana henan'omby ka Miozolomana avokoa ny 88%-n'ireo lasibatra.
Inty no heloka bevava feno fankahalana faha-7 nifandraika tamin'ny raharahan'omby tao Rajasthan tao anatin'ny 8 taona ary tranga faha-87 tao India. Hatramin'ny taona 2010 ny fiandohan'ny antontanisa momba ireo heloka bevava ireo – olona 34 no maty ary farafahakeliny 240 no naratra tamin'ny fanafihana. 56% tamin'ireo notafihana ary 88%-n'ny lasibatra no Miozolomana.
Ankoatra ny tranga momba ny famonoana an'i Pehlu Khan sy i Umar Mohammed dia mpanondrana omby iray hafa antsoina hoe Taleem Khan ihany koa no maty vokatry ny fifandonana tamin'ny polisy tao Rajasthan tamin'ny taona 2017.
Firenena maro ao India no manana fitsipika mandrara ny famonoana na ny fivarotana na ny famindra-monina ny omby. Mandràra ny famonoana omby sy ny fanondranana na ny famindra-monina ny omby amin'ny famonoana ny fanjakana indiana any Rajasthan.
Na izany aza, araka ny tatitra, Rajasthan, indrindra ny tanànan'i Alwar sy Bharatpur, no ahitana fanondranana omby an-tsokosoko betsaka indrindra ho any amin'ny famonoam-biby any amin'ny fanjakana samihafa any India, any amin'ireo mponina betsaka mihinana henan'omby amin'ny fivavahany ka anisan'izany ny Miozolomana.
Ny omby aloha, Miozolomana no farany?
Teo anelanelan'ny taona 2017 sy 2018, 44 no isan'ny tranga mikasika ny famonona tsy misy fitsarana notaterina tany India ka any amin'ny fanjakana Indiana ahitana an'i Rajasthan sy Jharkhand no nahitana izany betsaka indrindra ary arahin'i Maharashtra, Uttar Pradesh, ary Tamil Nadu.
Milaza ireo mpikambana ao amin'ny Parlemanta Shashi Tharoor fa azo lazaina fa avy amin'ny fisandratan'ny ideolojia Hindutva nataon'ny governemantan'i Modi manilika ny silamo sy ny vitsy an'isa no nahatonga ireo fanafihana ireo.
Nanambara ny IndiaSend fa nisy hatramin'ny nahatongavan'ny BJP nasionalista Hindu tamin'ny fahefany tamin'ny taona 2014, feno vondrona helatra ankavanana, ny 98%n'ny heloka bevava feno fankahalana:
Niseho hatramin'ny nahazoan'ny BJP sy ny praiminisitra Narendra Modi ny fahefana tamin'ny volana May 2014 ny ankabeazan'ny tranga 98% ireo.Tranga iray monja no voatatitra tamin'ny taona 2012 sy 2013. Toy ny any Rajasthan, tany amin'ireo fanjakana tantanin'ny BJP ny 56% amin'ireo tranga ireo
Toa nanjary lasa fahita matetika ireo famonoana tsy misy fitsaràna ireo nandritra ny taona vitsivitsy, ka nahatonga ny mpihira folk ao India nanoratra hira mikasika azy ireo araka ny tatitra nataon'ny tranonkala indiana Quint.
Mpisera Facebook Javed Farooqui nanasongadina ny fahatsapan'ireo vitsy an'isa ao India:
Iza no namono an'i Akbar? Andian'olona! Polisin'i Alwar! Mampalahelo ny mahafantatra fa masina kokoa ny fiarovana ny omby noho ny ain'olombelona ao amin'ny fireneko. Moa ve atao anjorom-bala tokoa ny vitsy an'isa eto amin'ny firenena ka kolokoloina ho olom-pirenena sokajy faharoa?
Sruthisagar Yamunan nanoratra tao amin'ny Scroll.in:
Toa lasa tsingerina azo vinananina izany, isaky ny misy fanafihana ataon'andian'olona amin'ireo Miozolomana amin'ny resaka ronono. Na dia voatondrotondro ho mpangalatra omby aza ireo niharan-doza dia toa hamaivanin'ny mpitondra BJP ilay tranga ary manohana ireo andian'olona aza izy. Tany am-piandohan'ity volana ity, notsikerain'ireo antoko mpanohitra ny minisitry ny asa Jayant Sinha noho izy nandravaka lehilahy valo izay voaheloka ho namono Miozolomana mpivaro-kena raha vantany vao navotsotra tamin'ny alalan'ny fandoavana onitra izy ireo.
I A.J. Philip mpisera facebook nanamarika miendrika fanesoana:
Tokony ho ankasitrahana amin'ny fanoloran-tenany amin'ny fiarovana ny biby ny mpitandro filaminana Alwar ao Rajasthan. Rehefa naheno izy ireo fa nisy olona iray izay hita niaraka tamin'ny omby roa ka novonoina dia natahotra ny amin'ny mety hahakamboty ny zanak'omby izy ireo.
Nentin'izy ireo avy hatrany tany amin'ny trano fialokalofana lavitra ireo biby raha mbola nijanona tao amin'ny paositry ny polisy nandritra ny adiny efatra kosa ilay olona niharan'ny vono, tsy nisy nanampy nandritra ny adiny efatra ka maty vokatr'izany. Izany no fanolorantena tsara indrindra.
Nitaraina i Saima Rehman:
Hadalàna raha hiandry ny BJP hanajanona ny famonoana tsy misy porofo. Io anie no nampiroborobo azy ireo.
Nanoratra i Mitali Sara mpisera Twitter:
Nanampy ombivavy aloha ny polisy, ary nijanona izy ireo mba hisotro dite kanefa mijininika ao anaty fiara ny ràn'ilay niharan'ny vono. Toa nanjary nitovy amin'ny andian'olona ny fanjakana.
Hoy i Satish Acharya mpanao sariitatra hoe:
Famonoana ao Alwar, làlana lavitra mankany amin'ny hopitaly
Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny India Today dia nanakiana ireo Miozolomana noho ny trangan-javatra avy amin'ny famonoana tsy misy fitsaràna ny lehiben'ny BJP Vinay Katiyar fa tsy nanameloka ny zava-nitranga:
Tranga tena fanameloka ny tranga famonoana olona tsy misy fitsaràna ao Alwar saingy tsy tokony mikitika omby sy manao fihantsiana ny haindò mahery setra ny ao amin'ny vondrona Miozolomana. Maro ny Miozolomana maro mampiatrano ombivavy nefa mamono azy ireo ihany koa ka hohanin'izy ireo ihany koa ny henan'omby.
Mandritra izany fotoana izany, nitarika ho amin'ny famonoana tsy misy fitsarana ny tsaho fihinanana henan'omby, hafatra niparitaka tao amin'ny Whatsapp izay nitraka famoizan'olona manerana an'i India. Ho setrin'izany voalaza fa nifanome tsiny noho ny fitohizan'ny olana ny governemanta sy ny Whatsapp (fananan'ny facebook) nefa tsy nisy tamin'izy roa tonta nandray fepetra ofisialy hitadiavana vahaolana.
Ny Alatsinainy 23 Jolay, nanambara ny fivoaran'ny komity roa mba hanome sehatra ara-dalàna hiatrehana ny tranganà herisetra sy ny famonoana ataon'andian'olona ny governemanta taorian'ny fahatezeran”ny antoko mpanohitra sy ny olom-pirenena
Na dia izany aza, mandra-pivoakan'ny lalàna isorohana ny fanenjehana (fampijaliana) dia mbola maro ny manahy fa mbola hanohy hiatrika ity andian'herisetra ity ireo vitsy an'isa.